Pure Ukufakwa Kwejusi - Umagazini Design
Ukufakwa Kwejusi Isisekelo somqondo we-Pure Juice siyinto ethinta imizwelo. Umqondo owakhekile wokuqamba amagama uhloselwe imizwa nemizwa yekhasimende, zinikeza inhloso yokumisa umuntu eduze kwaseshalofini elidingekayo futhi kumenze akhethe ngobuningi bezinye izinhlobo. Iphakethe libonisa imiphumela yokukhishwa kwezithelo, amaphethini anemibala aprintiwe ngokuqondile ebhodleleni lengilazi elifana nesimo sezithelo. Kugcizelela ngamehlo engqondo isithombe semikhiqizo yemvelo.
Igama lephrojekthi : Pure, Igama labaklami : Azadeh Gholizadeh, Igama leklayenti : Azadeh Gholizadeh.
Ukufakwa Kwejusi Azadeh Gholizadeh Pure